Ithegi: igama lesizinda | Martech Zone
Maka: igama lesizinda
Ungalikhetha njani igama leDomain kwiShishini lakho
NgoLwesihlanu, Oktobha 25, 2013 Douglas Karr
Kuyathakazelisa ukucinga emva xa bendihlala ndithenga amagama esizinda ngalo lonke ixesha (bendide ndithengise kube kanye!) Kunye nendlela endizimisele ngayo ngento endiza kuyithenga. Sivele saqala ishishini elitsha kwi-CircuPress kwaye asikaze siyibize ngegama le nkampani de siqiniseke ukuba siyakwazi ukuyithenga ngegama lesizinda! Ndicinga ukuba amaxesha ayatshintsha. Xa kuziwa ekukhetheni igama lesizinda, ukubetha
Uluhlu lwam lokuBhloga lokuKhangela ...
NgoMvulo, Matshi 10, 2008 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo bendinesikofu kunye noBrandon McGee, i-VP eneHuntington yebhanki egxile kwi-Mobile Banking. Ibhlog kaBrandon inendawo entle yokukhangela kwiinjini yokukhangela- enkosi kumxholo wakhe wokugxila kunye niche engqongqo ebhloga ngayo. Sincokole ngebhlog yakhe kwaye sade sathetha ngeselula okwexeshana, undibonelele ngengqondo epholileyo malunga nokuba eli shishini liyaphi kwaye kuyonwabisa. Nantsi ingqungquthela ye
Yintoni ekuyo? Iphi? Njani? Izicwangciso zokuthengisa kwiWebhu
NgoMgqibelo, Matshi 1, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Xa uza kuvula ivenkile, uthatha isigqibo sokuba uza kuyibeka phi ivenkile, uza kufaka ntoni evenkileni, kwaye ubayisa njani abantu kuyo. Ukuvula iwebhusayithi, nokuba ayiyiyo indawo yokuthengisa okanye ukuthengisa, kufuna izicwangciso ezifanayo: Kuza kubakho ntoni kwiwebhusayithi yakho? Iza kuba phi iwebhusayithi yakho? Banokuyifumana njani abantu? Uya kuzigcina njani? Yintoni eza kubakho kwiWebhusayithi yakho? Yikholwe okanye
Zeziphi iiNjini zokuKhangela eziFundwayo…
NgeCawa, ngoFebruwari 3, 2008 Lwesine, Okthobha 29, 2015 Douglas Karr
Iinjini zokukhangela amaphepha esalathiso ane-algorithms ezintsonkothileyo ezinobunzima beetoni ezahlukeneyo, zombini zangaphakathi nangaphandle kwiphepha lakho. Ndicinga ukuba kubalulekile ukuqonda ukuba zeziphi izinto eziphambili eziqwalaselwe ziinjini yokukhangela, nangona kunjalo. Uninzi lwazo zizinto onolawulo olupheleleyo kuzo xa ucwangcisa okanye uyila indawo yakho okanye ubhala nje iphepha lakho. Oku akukhathaleki nokuba yeyiphi na indawo yentengiso yewebhusayithi, ibhlog, okanye nayiphi na into